Xeerarka Hawlgalka ee Gudbinta Awoodda iyo Guuldarrada Awoodda ee Beddelka Danab ee Sare
KYN28A-12 danab sare ku-beddelidda “shan ka-hortag” shuruudaha hawlgalka isku-xidhka; 1. Ka hortag khaladka jabiye -wareegga - gacan -jabiyaha wareegga waa inuu ku jiraa booska shaqada ama booska imtixaanka, jebiyaha wareegga waa la xiri karaa, hawlgal furan. 2. Ka hortag dhaqdhaqaaqa wareegga wareegga ...
Warshadda korontada, oo ah meel koronto laga soo saaro, inta badan waa inay wax ka qabataa korontada Warshadeena, matoorka warshadda inta badan wuxuu u qaybsan yahay 6KV motor iyo 400V motor. Switchgear danab sare waxaa si weyn loo isticmaalaa in distributi awoodda ...
Madaxa Terminalka fiilada wuxuu isku daraa ka -hortagga biyaha, xakamaynta walbahaarka, gaashaanka, iyo dahaarka, wuxuuna leeyahay sifooyin koronto iyo farsamo oo wanaagsan, waxaana loo isticmaali karaa muddo dheer xaaladaha kala duwan ee deegaanka ee adag. Haddaba waa maxay shaqada terminal -ka fiilada? Aan kuu soo bandhigo i ...
Qorshaha dhismaha ee magaalooyinka caqliga badan iyo Internet -ka Waxyaabaha ayaa riixay dareemayaasha xagga hore. Hadday tahay Shiinaha ama adduunka oo dhan, dhisidda bulshooyin caqli badan waxay noqotay isbeddel aan laga soo kaban karin. Jawigan guud, dareemayaasha sida “buundada” magaalooyinka caqliga badan waa lama huraan ...
Shan xirfadaha naqshadeynta iyo tilmaamayaasha farsamo ee dareeraha
Tirada dareemayaasha ayaa ku soo badanaya guud ahaan dhulka dushiisa iyo Meelaha ku xeeran, oo dunida siinaya xog, Dareemayaashaan la awoodi karo ayaa ah awoodda ka dambeysa horumarinta Internet -ka Waxyaabaha iyo kacaankii dhijitaalka ahaa ee bulshadeennu wajahayso, haddana isku xira. ...
Falanqaynta khaladka iyo tillaabooyinka ka hortagga biraha
Waa maxay baddelaha? Switchgear wuxuu ka kooban yahay hal ama in ka badan oo danab-ku-beddel ah iyo koontarool la xiriira, cabbir, calaamad, ilaalin, sharciyeyn iyo qalab kale, oo leh soo-saaraha mas'uul ka ah dhammaan isku-xirnaanta korantada iyo farsamada gudaha, shir dhammaystiran oo ka kooban qaab dhismeed ...
Soo-koobidda Aqoonta Aasaasiga ah ee Beddelayaasha Nooca Qallalan
Transformers-ka nooca qallalan ayaa si weyn loogu adeegsadaa nalalka maxalliga ah, dhismayaasha dhaadheer, garoomada diyaaradaha, qalabka mishiinnada mashiinka CNC iyo meelo kale. Si fudud haddii loo dhigo, wax-beddelayayaasha nooca qalalan waxay tixraacaan kuwa wax-beddelayaashu kuwaas oo xuddunta iyo dabayshu aysan ku dhex milmin saliidda qallajinta. Hababka qaboojinta waxay u qaybsan yihiin dabiici ...
Taxaddarrada Isticmaalka Beddelidda Danab-sare
Sababtoo ah ku -beddeluhu wuu nool yahay, aad buu khatar u yahay. Haddii aadan dheg jalaq u siin markaad isticmaalayso, waxay mashiinka ka dhigaysaa mid aan si caadi ah u shaqayn karin, wuxuuna keenaa shoog koronto, kaasoo saamayn doona noloshaada. Sidaa darteed, markaad isticmaaleyso biraha korantada sare, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato t ...
Sida loo rakibo oo loo hawlgeliyo Gooynta Fuse -ka -bixidda
1/6 Habka hawlgalka Rakibaadda fiyuus soo-dejinta waa inay buuxisaa shuruudaha soo socda Ka hor rakibidda, hubi si aad u xaqiijiso farqiga u dhexeeya tuubada dhalaashay iyo taageerada ka-hortagga. Cabbirka u dhigma wuxuu buuxiyey shuruudaha buugga tilmaamaha si loo hubiyo in xiriir ku filan oo ku filan ...
Hawlgalinta Gooynta Fuse -ka -tagidda
Diyaargarowga badbaadada: Marka la soo jiidayo fiyuuska nooca dhibicda ah, hawlwadeenku waa inuu adeegsadaa usha dahaarka oo leh heer koronto oo habboon kuna gudba imtixaanka, xiraa kabaha dahaarka, galoofyada rinjiga, daboolka iyo muraayadaha indhaha, ama ku dul istaag madal alwaax qallalan, lana kormeero si loo ilaaliyo badbaadada qofka ....
Waa maxay farqiga u dhexeeya jabiye -wareegga korantada sare iyo ka -soocidda go'doominta?
Jebinta wareegga korantada ee sare (ama korantada korantada sare) waa aaladda koontaroolka awoodda ugu weyn ee saldhigga, oo leh astaamaha bakhtiinta arc, marka hawlgalka caadiga ah ee nidaamka, ay goyn karto iyo iyada oo loo marayo khadka iyo qalabka korantada kala duwan ee aan lahayn culeys iyo culeys hadda; Marka f ...
Farqiga u dhexeeya kabadhada kabadhada, golaha la buufin karo iyo kabadhka adag
Shabakadda shabakadda giraanta: sidoo kale loo yaqaan HXGN-12, XGN15-12 nooca korantada korantada sare Asal ahaan waxaa loola jeedaa kabadhka beddelka ee loo adeegsado shabakadda qaybinta giraanta, sababta oo ah qaab-dhismeedkeeda fudud, beddelka culeyska inta badan la isticmaalo iyo isku-darka fiyuuska, giraanta duubista kabtanka shabakadda. 1, giraanta ne ...